Home Wararka Ciyaaraha Maanta Wararka Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Caawa: Mario Mandzukic oo...
Markus Babbel ayaa ku booriyay Bayern Munich inay la soo saxiixato Dayot Upamecano si ay u xalliso dhibaatooyinka daafaca ee wiiqay ololahooda 2020-21 ilaa iyo haatan. (Goal)
Mario Mandzukic ayaa ugu biiraya AC Milan heshiis lix bilood ah oo uu ku qaadanayo 1.8 milyan oo euro sida laga soo xigtay (Tancredi Palmeri) .
Inter ayaan wali bixin qaybtii ugu horaysay ee Achraf Hakimi oo 40 milyan oo euro (£ 36m / $ 45m) ee loogu talagalay Real Madrid , sida ay warinayso (CalcioMercato)
AC Milan ayaa ku dhow inay gacanta ku dhigto labada weeraryahan ee Mario Mandzukic iyo Fikayo Tomori, sida uu sheegayo saxafiga reer Talyaani ee Antonio Vitiello . (Antonio Vitello)
Juventus ayaa isku dayaysa inay u dhaqaaqdo Paul Pogba xagaagan, hadii Manchester United ay hoos u dhigto qiimaha ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France, 27 jirkaan, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xagaaga 2022. (Calciomercato)
Daafaca Manchester City Eric Garcia, oo qandaraaskiisu dhacayo xagaaga, ayaa lala xiriirinayay Barcelona laakiin u dhaqaaqista ciyaaryahanka reer Spain, oo 20 jir ah, bisha Janaayo ayaa laga yaabaa inay fasaxdo ka dib markii kooxda Nou Camp ay dib u dhigtay doorashadooda madaxweynenimo ilaa bisha Maarso. (Manchester Evening News)
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa ah inay xagaagan u dhaqaaqeyso xidiga kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku . (Telegraph)
Weeraryahanka reer Argentina ee kooxda Inter Milan Lautaro Martinez, oo 23 jir ah, oo xagaagii lala xiriirinayay Barcelona , ayaa u muuqda mid ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda reer Talyaani. (Sportweek)
Tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa sheegay in kooxdu ay diiday dalabkii goolhayaha reer Brazil Neto ee ahaa inuu ka tago kooxda, iyadoo 31 jirkaan lala xiriirinayo Arsenal. (Metro)
Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in saxiixa cusub ee Amad Diallo uu si fiican ula qabsanayo tan ilaa markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda Atalanta . (Manutd)
Previous articlejuventus oo lagu soo waramayo inay xagaagan u dhaqaaqeyso saxiixa Paul Pogba xagaagan.
Next articleLiverpool iyo Manchester United oo ku kala baxay Bar-baro goolal la’an ah